ဒူဒူကြီး: June 2012
ကုန်သွယ်ရေကြောင်းခရီးသွားလာမှု merchant shipping industry လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ၊ လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ ပြဌာန်းထားတဲ့ regulations and codes ဆိုတဲ့ စည်းမျှဉ်းနဲ့ ဥပဒေတွေ၊ အများအပြားရှိပါတယ်။ merchant shipping regulation ဆိုင်ရာစည်းမျှဉ်းအများစုကို၊ 'safety of life at sea' ဆိုတဲ့၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ရေးနဲ့ 'marine pollution prevention' ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ပြင် ညစ်ညမ်းမှုမှတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်၊ ရည်ရွယ်ပြဌာန်း ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဌာန်းထားတဲ့ စည်းမျှဉ်းနဲ့ ဥပဒေတွေအားလုံးကို၊ organizational structure အနေနဲ့ တစုတစည်းတည်း၊ လိုက်နာစေဖို့ 'ISM Code' လို့ခေါါတဲ့ international safety management code ဥပဒေဖြင့်၊ ထပ်မံထိန်းချုပ်ထား ပါတယ်။
ISM Code ဟာ၊ technical accepts of the ship, training of the ship personal နဲ့ marine pollution ဆိုင်ရာ၊ regulations တွေအားလုံးကို၊ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သဘေ်ာတွေကို စီမံခန့်ခွဲကာ၊ ပြေးဆွဲနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း shipping company တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် regulations တွေ အားလုံးကို၊ framework အနေနဲ့ စုစည်းကာ၊ ပြဌာန်းထားခြင်းလည်း၊ ဖြစ်ပါတယ်။ 'Shipping Management' အနေနဲ့ သဘေ်ာတွေကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါ၊ ISM Code ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုအပ်ပေမယ့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု business ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့၊ Law ဆိုတဲ့ ဥပဒေအရ လိုက်နာ ကျင့်သုံးစရာတွေကိုတော့၊ ညွှန်ပြထားခြင်း မရှိတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
merchant shipping industry လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ၊ မတော်တဆထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု accidents တွေရဲ့ (၈၀) % ဟာ၊ human errors ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့အမှားကြောင့်ဖြစ်ပေါါခဲ့ရပါတယ်။ ISM Code ဟာလူတွေရဲ့အမှားကို minimizing အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချဖို့၊ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ISM Code ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီး၊ သဘေ်ာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါ၊ အဓိက အချက်(၃) ချက်ကို၊ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ safety management system အနေနဲ့ လိုက်နာရမယ့် အဓိကအချက် (၃) ချက်ကတော့
(၁)။ Organizing activities on boardaship ဆိုတဲ့ သဘေ်ာဟာ ပင်လယ်ပြင်မှာသွားလာ ခုတ်မောင်းနေစဉ်၊ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ စည်းမျှဉ်းနဲ့ ဥပဒေတွေအားလုံးကို တစုတစည်းတည်း၊ လိုက်နာစေခြင်း၊
(၂)။ Organizing the shore activities when ship reachesaport ဆိုတဲ့ သဘေ်ာဟာ ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ရှိတဲ့အခါ၊ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ စည်းမျှဉ်းနဲ့ ဥပဒေတွေအားလုံးကို တစုတစည်းတည်း၊ လိုက်နာစေခြင်းနဲ့
(၃)။ Increasing effective communication between ship and shore ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့သဘေ်ာနဲ့ သဘေ်ာကို စီမံခန့်ခွဲနေသူတွေကြားမှာ၊ သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ ဆက်သွယ်မှု၊ ထိရောက်လျှင်မြန်စေခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ safety management system အနေနဲ့ လိုက်နာရမယ့် အဓိကအချက် (၃) ချက်ကိုပြဌာန်းရတဲ့၊ ရည်ရွယ်ချက် 'objectives' တွေကတော့၊
(၁)။ To ensure that all the regulations, both national and international, such as SOLAS, MARPOL, Union and Labor laws are followed - သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ national နဲ့ နိုင်ငံတကာ international မှပြဌာန်းထားတဲ့၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ရေးဆိုင်ရာ SOLAS regulation, ပင်လယ်ပြင်ညစ်ညမ်းမှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ MARPOL regulation, သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေနဲ့ အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာ Union and Labor laws၊ အစရှိတဲ့ regulations တွေကို၊ တိကျသေခြာစွာ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးစေရန်၊
(၂)။ Creating awareness to carry out safe procedures and efficient working practices on ship and on shore - ပင်လယ်ပြင်မှာ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့သဘေ်ာနဲ့ သဘေ်ာကို စီမံခန့်ခွဲနေသူတွေ ကြားမှာ၊ safe procedures တွေအနေနဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီး၊ ထိရောက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု efficient working practices အလေ့အကျင့်၊ ဖြစ်ပေါါစေရန်၊
(၃)။ Making and implementing safe procedures to tackle emergency situations - အရေးပေါါ emergency situations အခြေအနေတွေကို၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းတဲ့အခါ၊ ဘေးကင်း လုံခြုံစိတ်ချရမယ့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကို making and implementing အနေနဲ့ အသုံးပြုကျင့်သုံးပြီး၊ အကောင်အထည်ဖော်စေရန်၊
(၄)။ Ensuring technical planned maintenance is carried out on schedule and in an efficient way - သဘေ်ာမှာတတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ စက်၊ ပစ္စည်း၊ ကရိယာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ 'PMS' လို့ခေါါတဲ့ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ အချိန်ဇယား planned maintenance schedule အတိုင်း၊ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုကို၊ ထိရောက်သေခြာစွာဆောင်ရွက်စေရန်နဲ့
(၅)။ Ensuring safety at sea and prevention of marine pollution, conducting training of Ship's Personnel - ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ရေး safety at sea နဲ့ ပင်လယ်ပြင်ညစ်ညမ်းမှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေး marine pollution prevention တို့နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ သဘေ်ာပေါါမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ 'Ship's Personnel' တွေအနေနဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှု conducting training တွေကို၊ အမြဲဆာင်ရွက်စေရန်၊ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ၊ IMO လို့ခေါါတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့မှ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOLAS, Chapter IX, 'Management for the Safe Operation of Ships' regulation အရ၊ ISM Code ကို၊ ပြဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေကို စီမံခန့်ခွဲကာ၊ ပြေးဆွဲနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း shipping company တွေမှာ၊ SMS ဆိုတဲ့ 'Safety Management System' ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ shipping company ရဲ့ safety management system ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်း booklet လိုတော့ "SMM - Safety Management Manual" လို့ခေါါပါတယ်။ classification society ဟာ၊ statutory service အနေနဲ့ shipping company ရဲ့ safety management system ကို၊ စစ်ဆေးပြီး၊ SOLAS, Chapter IX, 'Management for the Safe Operation of Ships' regulation နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပါက၊ သက်သေခံ လက်မှတ်အဖြစ် DOC လို့ခေါါတဲ့ 'Document of Compliance' certificate ကို၊ ထုတ်ပေးပါတယ်။ shipping company ဟာ DOC certificate ရှိမှသာ၊ သဘေ်ာတွေကို စီမံခန့်ခွဲကာ၊ ပြေးဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ DOC certificate ထုတ်ပေးရန်အတွက်အတွက်၊ classification society မှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း ကိုတော့ 'ISM audit' လို့ခေါါပါတယ်။ DOC certificate ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါ၊ SMC လို့ခေါါတဲ့ 'Safety Management Certificate' ကို၊ မှတ်ပုံတင်ထားရာ သဘေ်ာအတွက်၊ ထပ်မံအတည်ပြုထုတ်ပေးပါတယ်။
Reference : ISM Auditor Training Course conducted by Germanischer Lloyd Classification Society.
Posted by ကိုထွန်း at 17:37 1 comment:
Classification society အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို၊ အပ်နှံကာ သဘေ်ာတည်ဆောက်နေစဉ် ကာလအတွင်း၊ classification & statutory certificates တွေကို၊ မရရှိခင် သဘေ်ာပိုင်ရှင် ship owner မှ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်တခုခုမှာ၊ 'port of registry' အဖြစ် သဘေ်ာကို မှတ်ပုံတင်ဖို့၊ လိုအပ်ပါတယ်။ သဘေ်ာ မှတ်ပုံတင်ရာ တိုင်းပြည်မှ၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှု administration အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အာဏာပိုင် authority အဖွဲ့အစည်း ရုံးစိုက်ရာ၊ 'မြို့' အမည်ကို၊ ရေးသားဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက်၊ port of registry အဖြစ်၊ ခေါါဆိုသုံးနှုံးကြပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ထားရာ၊ registered တိုင်းပြည်ရဲ့ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းကို၊ 'flag state' လို့ခေါါပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ထားရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အလံ 'flag' ကို၊ သဘေ်ာမှာလွှင့်ထူခွင့် ရတဲ့အတွက်၊ 'flag state' လို့ခေါါဆိုခြင်းဖြစ်သလို၊ သဘေ်ာမှတ်ပုံတင်ထားရာတိုင်းပြည်ရဲ့၊ 'jurisdiction' ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ခံစားပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်း၊ ရရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သဘေ်ာဟာ၊ မှတ်ပုံတင်ထားရာ flag state တိုင်းပြည်မှ၊ ပြဌာန်း ထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ Merchant Shipping Act ဥပဒေတွေရဲ့ အကျိုးကို၊ ခံစားပိုင်ခွင့်တွေ ရှိတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
flag state မှ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ သဘောတူညီချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ SOLAS လို့ခေါါတဲ့၊ International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 ရဲ့ Chapter V Regulation 14(2) အရ၊ 'Minimum Safe Manning Certificate' နဲ့ International Convention on Tonnage Measurement, 1969 အရ၊ 'International Tonnage Certificate' တို့ကို classification & statutory certificate တွေအဖြစ် ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့်သွားလာကာ၊ ထိမ်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း တင်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့၊ လိုအပ်မယ့် သဘေ်ာဝန်ထမ်း ship crews and staff လူဦးရေအရည်အတွက်ကို 'Minimum Safe Manning Certificate' မှ၊ သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ သဘေ်ာဆိုက်ကပ်ရပ်နားရာ၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့တွေရဲ့ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှု administration အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အာဏာပိုင် authority အဖွဲ့အစည်းကိုတော့၊ 'port state' လို့ခေါါပါတယ်။
သဘေ်ာဆိုက်ကပ်ရပ်နားရာ၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့တွေဟာ သဘေ်ာရဲ့ 'International Tonnage Certificate' မှာဖော်ပြထားတဲ့၊ အချက်အလက်တွေအပေါါမူတည်ပြီး၊ 'ဆိပ်ကမ်းခွန်' ကောက်ယူ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 'International Tonnage Certificate' ကိုအခြေခံကာ၊ Suez နဲ့ Panama Canal တူးမြောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ထံမှ Suez နဲ့ Panama Canal Tonnage Certificate တွေ ကိုလည်း၊ လျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါတယ်။ Suez နဲ့ Panama Canal Tonnage Certificate တွေဟာ၊ သီးခြား 'Special Tonnage Certificate' တွေ ဖြစ်ပြီး၊ သဘေ်ာဟာ Suez နဲ့ Panama Canal တူးမြောင်းတွေကို၊ ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ၊ သက်ဆိုင်ရာ တူးမြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ၊ 'Special Tonnage Certificate' တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့၊ အချက်အလက်တွေ အပေါါ မူတည်ပြီး၊ 'တူးမြောင်းဖြတ်သန်းခွန်' ကောက်ယူပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေကြောင်းခရီးသွားလာမှု merchant shipping အဖြစ်၊ တနေရာနဲ့တနေရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတခုမှ၊ အခြားနိုင်ငံတခုသို့၊ သဘေ်ာတွေကိုအသုံးပြုပြီး၊ သွားလာတဲ့အခါ၊ မတော်တဆ ကြုံလာနိုင်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေ၊ လူတွေရဲ့ပေါ့ဆမှုတွေနဲ့ အသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကြောင့်၊ ဖြစ်ပေါါလာနိုင်မယ့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေကို၊ တားဆီးကာကွယ်ဖို့ classification societies အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ flag state အဖွဲ့အစည်းတို့ဟာ၊ တာဝန်ယူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။
classification societies အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ၊ နည်းပညာနဲ့အတတ်ပညာရှုဒေါင့် technical issue ကို၊ အခြေခံကာဆောင်ရွက်ပါတယ်။ flag state ဆိုတဲ့ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့၊ on board safety လို့ခေါါတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့်သွားလာနိုင်ရေး၊ personal training လို့ခေါါတဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ pollution prevention လို့ခေါါတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုတွေကို၊ တားဆီး ကာကွယ်ရေးနဲ့ ship to shore communication လို့ခေါါတဲ့ ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာထဲမှ သဘေ်ာနဲ့ ကုန်းမြေဆိပ်ကမ်းတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေ နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ပြဌာန်းထားတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘေ်ာတူညီချက်တွေကို၊ စနစ်တကျလိုက်နာကျင့်သုံးစေဖို့၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Reference : Classification Societies - What, Why and How, IACS - International Association of Classification Societies © IACS 2011, Ship Knowledge - A mordern encyclopedia by K. Van Dokkum.
Posted by ကိုထွန်း at 18:25 No comments:
Classification Society မှထုတ်ပေးတဲ့ သက်သေခံ statutory certificates တွေထဲမှ၊ Anti-fouling certificate ကလွဲလို့ကျန်၊ certificates တွေဟာလည်း၊ validity period အနေနဲ့ (၅) နှစ် သက်တမ်း ရှိပါတယ်။ statutory certificates တွေကိုစတင်ထုတ်ပေးစဉ်မှာ၊ (၃) လ သက်တမ်းရှိတဲ့ ယာယီ 'interim certificates' တွေအဖြစ်ထုတ်ပေးပြီး၊ သက်တမ်း (၃) လအတွင်း၊ အပြောင်းအလဲ တစုံတရာမရှိမှသာ၊ (၅) နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ အမြဲတမ်း 'full certificates' တွေအဖြစ်၊ အတည်ပြုပေးပါတယ်။
Classification society မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုတဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် observations တွေကို၊ 'deficiencies' များအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ rectification အနေနဲ့ အရေးယူပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်။ classification services အနေနဲ့ စစ်ဆေးစဉ်၊ Safety Equipments Certificate နဲ့ International Oil Pollution Prevention Certificate တို့ဟာ၊ သဘေ်ာမှာ လိုက်ပါစီးနင်းသူတွေရဲ့ human lives ဆိုတဲ့၊ လူ့အသက်တွေသာမက၊ environment ဆိုတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပါ၊ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ မှကာကွယ်နိုင်ဖို့၊ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ Regulations တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့လျှင် သက်သေခံ statutory certificate ထုတ်ပေးခြင်းကို၊ ရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ပြီး၊ သဘေ်ာပိုင်ရှင်မှ ချက်ခြင်း အရေးယူ ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အလားတူ Class certificate မှ hull and machinery ဆိုင်ရာ၊ အချက်အလက်အလက်များ၊ Safety Management Certificate, DOC Document Of Compliance, International Ship Security Certificate, Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Radio Certificate, International Load Line Certificate, International Air Pollution Prevention Certificate နဲ့ International Sewage Pollution Prevention Certificate တို့မှ အချက်အလက်အလက်များဟာ၊ regulations တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့လျှင်လည်း၊ 'deficiencies' အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး၊သဘေ်ာပိုင်ရှင်မှ အနည်းဆုံး (၁၄) ရက်မှ အများဆုံး ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း၊ အရေးယူ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
'classification services' အဖြစ်၊ တည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုမယ့် materials အမျိုးအစားတွေဟာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှရှိမရှိ၊ စစ်ဆေးကာ အတည်ပြုပေးခြင်း ကို၊ ဒီနေရာမှာ နမူနာတခုဖြင့်ဖော်ပြပါဦးမယ်။ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့၊ materials တွေဟာ၊ ခိုင်မာပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ 'strong mechanical properties' ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ materials တွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကို toughness, ductility နဲ့ malleability ဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
material အမျိုးအစားတခုကို၊ bending အဖြစ် 'ကွေး' လိုက်တဲ့အခါ၊ fracture ဆိုတဲ့ အက်ကွဲကျိုးပဲ့မှု မဖြစ်ပေါါပဲ၊ ကွေးကောက်နိုင်ခြင်းကို 'toughness' လို့ခေါါပါတယ်။ tough material ဟာ material actually fail ဆိုတဲ့၊ အမှန်တကယ်အက်ကွဲကျိုးပဲ့တဲ့အခြေအနေအထိ၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ cycles of bending အနေနဲ့၊ bending stress အကွေးဒါက်ကို၊ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ 'toughness' ဟာ material အပေါါ bending force သက်ရောက်တာနဲ့၊ အလွယ်တကူ အက်ကွဲကျိုးပဲ့သွားခြင်းဆိုတဲ့ 'brittleness' ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်၊ ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်ပါတယ်။
material actually fail ဆိုတဲ့၊ အမှန်တကယ်အက်ကွဲကျိုးပဲ့သွားခြင်း၊ မဖြစ်ပေါါပဲ အပူရှိန်ပြောင်းလဲ မြင့်တက်သွားမှု 'temperature increase' ကြောင့်၊ deformed အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုံသဏ္ဍန် ပျက်ယွင်း သွားခြင်းကို 'ductility' လို့ခေါါပါတယ်။ သဘေ်ာတည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ tin, zinc, lead နဲ့ copper အစရှိတဲ့ ductility materials တွေကိုလည်း၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရပါတယ်။ ductility ရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်၊ ဂုဏ်သတ္တိ ကတော့ 'malleability' ဖြစ်ပါတယ်။ compression ကြောင့် crack အဖြစ် အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် extraction နဲ့ forging တို့ကြောင့်၊ shape ဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍန် ပျက်ယွင်းသွားခြင်းကိုတော့၊ 'malleability' လို့ခေါါပါတယ်။ အပူရှိန်ပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားပေမယ့်၊ ဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍန် ပျက်ယွင်းသွားခြင်း မရှိတဲ့၊ malleability materials တွေကိုလည်း၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
(၁၉၇၀) ခုနှစ်မှ (၁၉၇၅) ခုနှစ်အတွင်း၊ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းလောကမှ၊ သဘေ်ာတွေရဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု damages တွေကို၊ Classification societies တွေမှ၊ survey အဖြစ် စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး၊ လေ့လာ ကြည့်တဲ့အခါ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ materials တွေရဲ့ mechanical properties ဆိုင်ရာ၊ အားနည်းချက် weakness တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့ အကြောင်းရင်း root causes တွေအမျိုးမျိုးရှိပေမယ့်၊ အများဆုံး maximum root cause ကတော့၊ 'brittle failure' နဲ့ 'fatigue failure' တို့သာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။ Classification societies တွေဟာ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာမှာအသုံးပြုမယ့် material properties တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ တင်းကျပ်တိကျတဲ့ regulations တွေကို ထပ်မံပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာအဖြစ်၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာမှာအသုံးပြုမယ့် steel material နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ Classification societies တွေမှ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ 'grades' တွေကို၊ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ larger sized သဘေ်ာကြီးတွေကို၊ တည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ သဘေ်ာရဲ့ 'light displacement' ကိုလျှောချ့နိုင်ဖို့၊ steel plates တွေရဲ့ thickness အထူ ကိုလည်း၊ လျှော့ချဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒီအခါ မြင့်မားတဲ့ 'higher tensile strength' ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့၊ steel plates တွေကို၊ အစားထိုးအသုံးပြုစေဖို့ Classification societies တွေမှ၊ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မူလအသုံးပြုခဲ့တဲ့ grade A, B, D နဲ့ E ဆိုတဲ့ steel plates တွေအစား၊ grade AH, AB, AD နဲ့ AE ဆိုတဲ့၊ steel plates တွေကို၊ အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ normal grade A, B, D နဲ့ E ဆိုတဲ့ steel plates တွေရဲ့ 'tensile strength' ဟာ၊ 400 ~ 490 MN per Sq. m ခန့်သာရှိပြီး၊ အစားထိုးအသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ steel plates တွေရဲ့၊ 'high tensile strength' ကတော့ 490 ~ 620 MN per Sq. m အထိရှိတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Reference : AMSA - Australian Maritime Safety Agency
Posted by ကိုထွန်း at 07:43 No comments:
Classification Societies တွေရဲ့ အစကတော့၊ လန်ဒန်မြို့ကြီးရဲ့ Tower Street မှ၊ Edward Lloyd ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေပန်းတိမ်ဆရာတွေ သဘေ်ာပြန်လာ၊ မလာကို အလောင်းအစား လုပ်ကြရာမှာ၊ ကုန်သည် ပွဲစားတွေနဲ့ သဘေ်ာသားတွေပါ၊ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Edward Lloyd ဟာ ကော်ဖီဆိုင်ရောင်းအားတက်ကာ၊ စည်ကားစေဖို့၊ ရွက်လွှင့်ထွက်ခွာမယ့် သဘေ်ာတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို၊ စုဆောင်းကာ၊ ပုံနှိပ်ဝေဌပေးခဲ့ပါတယ်။ အလောင်းအစားကို စနစ်တကျ ရှိစေဖို့အတွက်လည်း၊ စာအုပ်တအုပ်မှာ ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ပါတယ်။ အလောင်းအစားနဲ့ပက်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်တဲ့ စာအုပ်ကို 'Lloyd's Register Book' လို့၊ နာမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရေစီးကြောင်းနဲ့ လေတိုက်အားကို အားကိုးကာ၊ နေ့မှာ 'နေ'၊ ညမှာတော့ 'လ နဲ့ ကြယ်တာရာ' တွေရဲ့၊ အကူအညီကိုယူပြီး၊ 'ကမ်း' မမြင်နိုင်တဲ့ ပင်လယ်တွေနဲ့ 'လမ်း' ရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တဲ့ သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကို ၊ ဖြတ်သန်းခြင်းဟာ၊ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မာယာများတဲ့ ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာမှာ၊ ရေကြောင်းခရီး သွားလာမှု အတတ်ပညာနဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်မှု နည်းပညာတို့သာလျှင်၊ အားကိုးစရာဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံဝယ်ယူတဲ့အခါ၊ တိကျတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက် 'technical assessment' တခုပေါါ အခြေခံဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်၊ Edward Lloyd ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှ၊ စခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှ၊ ပထမဆုံး classification regulation ကို၊ (၁၇၆၄) ခုနှစ်မှာ ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
သစ်သားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရွက်သဘေ်ာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ 'quality and condition' အရည်အသွေးနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေပေါါ အခြေခံကာ၊ ကိုယ်ထည် hull နဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ A, B ,C ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွက်တိုင် mast တို့ ကုန်ပေါက်အဖုံး hatches တို့နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ 1, 2,3ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတလွှား၊ နယ်မြေသစ်တွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာနဲ့ အမျှ၊ (၁၈) ရာစုနှစ်ဦးတွေအလွန်မှာ၊ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ခရီးသွားလာမှု၊ တိုးတက်လာသလို၊ အာမခံ အရောင်းအဝယ် insurance markets ဈေးကွက်လည်း၊ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခြား တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း၊ အာမခံဈေးကွက်တိုးတက်လာတဲ့အတွက်၊ 'technical assessment' အပေါါအခြေခံတဲ့၊ 'classification and statutory services' လုပ်ငန်းတွေပေါါပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေါါတ်ကာလမှာတော့ 'Classification societies' တွေဟာ၊ 'built and maintained' ဆိုတဲ့ သဘေ်ာ စတင်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ အသုံးပြုပြေးဆွဲခြင်းအစရှိတဲ့၊ ကိစ္စရပ်တွေအတွက်၊ 'classification and statutory services' လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ၊ IMO လို့ခေါါတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့သို့၊ နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာနဲ့ပက်သက်တဲ့၊ အကြံပေးခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
'classification services' ဆိုတာကတော့၊ တည်ဆောက်မယ့် သဘေ်ာရဲ့ drawings တွေနဲ့ construction plans တွေကို၊ စစ်ဆေးကာအတည်ပြုပေးခြင်း၊ တည်ဆောက်နေစဉ် construction process ကာလတလျှောက်လုံး၊ ပြဌာန်းထားတဲ့ defined standards တွေကို၊ တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်းနဲ့ တည်ဆောက်ရာမှာအသုံးပြုမယ့် materials အမျိုးအစားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူ involved persons တွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု skill အရည်အသွေးတို့ကို၊ စစ်ဆေးကာ အတည်ပြုပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
classification services တွေဟာ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့မှ၊ international conventions တွေအရ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ International Convention for the Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 with its Protocols as amended, International Convention of Load lines (LLC) 1966, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973 with its Protocol, International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping of Seafarers (STCW) 1972/ 1995, Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972, Merchant Shipping (Minimum Standards ) Convention 1976 (ILO Convention Nr. 147) နဲ့ International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code/ SOLAS Ch. IX) တို့အပေါါမှာ၊ အခြေခံထားပါတယ်။
classification's standards တွေအရ၊ တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ 'Certificate of Class' ဆိုတဲ့၊ သက်သေခံလက်မှတ်ကို၊ အတည်ပြုကာထုတ်ပေးပါတယ်။ Certificate of Class သို့မဟုတ် Class Certificate ဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ကိုယ်ထည် hull နဲ့ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့၊ စက်ပစ္စည်း machinery တွေအပေါါအခြေခံထားတဲ့၊ သက်သေခံအတည်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပြီး၊ classification society အနေနဲ့ 'statutory services' ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေခံအတည်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ 'statutory' အဖြစ်ထုတ်ပေးတဲ့၊ Class Certificate ဟာ၊ validity period အနေနဲ့ (၅) နှစ် သက်တမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် IMO ရဲ့ international conventions တွေအရ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ regulations တွေနဲ့၊ ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးတဲ့ အခြား statutory certificates တွေကိုလည်း၊ ထုတ်ပေးရပါတယ်။
SMC လို့ခေါါတဲ့၊ Safety Management Certificate, DOC လို့ခေါါတဲ့ Document Of Compliance, ISSC လို့ခေါါတဲ့ International Ship Security Certificate, SC လို့ခေါါတဲ့ Cargo Ship Safety Construction Certificate, SR လို့ခေါါတဲ့ Cargo Ship Safety Radio Certificate, SE လို့ခေါါတဲ့ Cargo Ship Safety Equipment Certificate, LL လို့ခေါါတဲ့ International Load Line Certificate, IOPP လို့ခေါါတဲ့ International Oil Pollution Prevention Certificate, ITC လို့ခေါါတဲ့ International Tonnage Certificate, IAPP လို့ခေါါတဲ့ International Air Pollution Prevention Certificate, ISPP လို့ခေါါတဲ့ International Sewage Pollution Prevention Certificate နဲ့ Anti-fouling certificate လို့ခေါါတဲ့ Control of Harmful Anti-fouling Systems Certificate အစရှိတဲ့၊ statutory certificates တွေဟာ၊ international conventions တွေအရ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ regulations တွေနဲ့၊ ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း classification society မှ၊ စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးတဲ့၊ certificates တွေဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာသဘေ်ာအလိုက် သက်သေခံလက်မှတ် statutory certificates တွေအပြင်၊ statutory booklet အနေနဲ့၊ အတည်ပြုပေးရတဲ့ သက်သေခံစာအုပ်စာတမ်းတွေလည်း၊ ရှိပါသေးတယ်။ Intact Stability Booklet, Damage Control Booklet, SOPEP လို့ခေါါတဲ့ Shipboard Oil Pollution Emergency Plan နဲ့ SMPEP လို့ခေါါတဲ့ Shipboard Marine Pollution Emergency Plan တို့ဟာ၊ classification society မှ၊ စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးတဲ့၊ သက်သေခံ statutory booklets တွေဖြစ်ပါတယ်။
Reference : Classification Societies - What, Why and How, IACS - International Association of Classification Societies © IACS 2011, Ship Knowledge - A modern encyclopedia by K. Van Dokkum.
Posted by ကိုထွန်း at 06:17 No comments:
သဘေ်ာတစီးကို၊ တည်ဆောက်အသုံးပြုရာမှာ နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာနဲ့ တတ်ဆင်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်း၊ ကရိယာတွေဟာ 'technically satisfactory state' ဆိုတဲ့၊ အဆင့်မှီပြီး၊ စိတ်ချ ယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိခဲ့လျှင်၊ မတော်တဆ ကြုံတွေ့လာမယ့်ဘေးအန္ထရာယ် accidents တွေနဲ့ ပျက်စီးမှု damages တွေဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ ဘေးအန္ထရာယ်နဲ့ ပျက်စီးမှုတွေကြောင့် သဘေ်ာမှာလိုက်ပါ စီးနင်းသူတွေရဲ့ human lives ဆိုတဲ့၊ အသက်တွေသာမက၊ environment ဆိုတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပါ၊ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
ရေကြောင်းခရီးသွားလာကုန်သွယ်မှု 'shipping industry' မှတဆင့်၊ human lives နဲ့ environment ကို မထိခိုက်စေဖို့၊ တနည်းအားဖြင့် သဘေ်ာတစီးဟာ 'technically satisfactory state' အနေအထားမှာ၊ အမြဲပုံမှန်ရှိနေစေဖို့ 'regulations and codes' ဆိုတဲ့ စည်းမျှဉ်းနဲ့ ဥပဒေတွေကို၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သသဘောတူညီချက် 'international conventions' တွေအရ၊ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ အမှန်တကယ် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်စား၊ စစ်ဆေးထိန်းကြောင်းပေးဖို့ လိုလာပါတယ်။ 'Classification Societies' တွေဟာ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုယ်စား၊ 'technical issues' ဆိုတဲ့ နည်းပညာနဲ့ အတတ်ပညာဆိုင်ရာရှူဒေါင့်မှ စစ်ဆေးသတ်မှတ်ကာ အတည်ပြုပေးတဲ့၊ 'classification and statutory services' လုပ်ငန်းကို၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
(၁၈) ရာစုနှစ်လယ်လောက်တုန်းက၊ လန်ဒန်မြို့ကြီးရဲ့ Lloyd's coffee house ဆိုတဲ့၊ ကော်ဖီဆိုင်မှာ၊ ရွှေ ပန်းတိမ်ဆရာ gold smiths တွေဟာ၊ အဂ်လန်ကျွန်းမှ ရွက်လွှင့်ထွက်ခွာ သွားကြတဲ့၊ သဘေ်ာကြီးတွေ၊ ပြန်လာမလာနိုင်ကို၊ အလောင်းအစားလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရွှေပန်းတိမ် ဆရာတွေ၊ အလောင်းအစား လုပ်ရာမှတဆင့်၊ insurance cover ဆိုတဲ့ အာမခံကိစ္စ ဖြစ်ပေါါလာသလို၊ အာမခံဝယ်ယူတဲ့အခါ၊ တိကျတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ပြဌာန်းချက် 'technical assessment' တခုပေါါ အခြေခံဖို့လိုအပ်လာတဲ့ အတွက်၊ (၁၇၆၀) ခုနှစ်လောက်မှာ၊ 'Lloyd's Register Book' ဆိုတဲ့၊ technical issues ရှူဒေါင့်မှ စစ်ဆေးသတ်မှတ်ကာ အတည်ပြုပေးမယ့်၊ အဖွဲ့အစည်းကလေးပေါါပေါက်လာပါတယ်။
'technical assessment' ရေးဆွဲသတ်မှတ်ပေးရာမှာတဆင့်၊ 'classification and statutory services' လုပ်ငန်းတွေပါ၊ ပေါါပေါက်လာပြီး၊ ဥရောပတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်မှာ BV ဆိုတဲ့၊ 'Bureau Veritas'၊ အဂ်လန်မှာ LR ဆိုတဲ့ 'Lloyd's Register of British and Foreign Shipping'၊ အီတလီမှာ RINA ဆိုတဲ့ 'Registro Italiano Navale'၊ နော်ဝေမှာ DNV ဆိုတဲ့ 'Det Norske Veritas'၊ ဂျာမဏီမှာ GL ဆိုတဲ့ 'Germannisher Lloyd'၊ ရုရှားမှာ RS ဆိုတဲ့ 'The Russian Maritime Register of Shipping' အစရှိတဲ့ Classification Societies တွေကို၊ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။
BV ကို (၁၈၂၈) ခုနှစ်၊ LR ကို (၁၈၃၄) ခုနှစ်၊ RINA ကို (၁၈၆၁) ခုနှစ်၊ DNV ကို (၁၈၆၄)၊ GL ကို (၁၈၆၇)နဲ့ RS ကို (၁၉၁၃) ခုနှစ်တွေမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသလို၊ အလားတူ အမေရိကနဲ့ အာရှမှာလည်း၊ 'ABS' ဆိုတဲ့ American Bureau of Shipping ကို (၁၈၆၁) ခုနှစ်နဲ့ 'ClassNK' ဆိုတဲ့ Nippon Kaiji Kyokai ကို (၁၈၉၉) ခုနှစ်တို့မှာ၊ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ကာလမှာတော့ (၁၉၃၆) မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ 'PR - Polish Register of Shipping'', (၁၉၄၉) မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Yugoslav Register of Shipping သို့မဟုတ် CRS - Croatian Register of Shipping', (၁၉၅၆) မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ 'CCS - China Classification Society', (၁၉၆၀) ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ 'KR - Korean Register of Shipping' နဲ့ (၁၉၇၅) ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ 'IRS - Indian Register of Shipping' တို့အပါအဝင်၊ Classification Societies အဖွဲ့အစည်းအရည်အတွက် (၅၀) ခန့်ရှိကြောင်း 'International Association of Classification Societies' အသင်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ သိရပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 16:33 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 03:28 No comments:
'blade tip' ဆိုတာကတော့ propeller hub ရဲ့ အလယ်ဗဟို၊ center မှ propeller blade ရဲ့ ထိပ်ဖက် အဆုံး၊ maximum reach out လို့ခေါါတဲ့ အများဆုံး၊ အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ propeller blades တွေဟာ၊ hub ပေါါမှာ pitch ဆိုတဲ့ အစောင်းဒီဂရီတခုနဲ့ တည်ရှိနေပါတယ်။
သဘေ်ာဖက်သို့စောင်းကာကွေးနေတဲ့ blade edge ကို၊ 'leading edge' လို့ခေါါပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့အပြင်ဖက် သို့၊ စောင်းကာကွေးနေတဲ့ blade edge ကိုတော့ 'trailing edge' လို့ခေါါပါတယ်။ သဘေ်ာဖက်မှာရှိနေတဲ့ blade မျက်နှာပြင် surface ကို 'blade back' လို့ခေါါပြီး၊ propeller ရဲ့ suction pressure သို့မဟုတ် negative pressure side လည်းဖြစ်ပါတယ်။ cavitation ဟာ negative pressure side ဖြစ်တဲ့၊ blade back မှာသာဖြစ်ပေါါပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့အပြင်ဖက်မှ blade မျက်နှာပြင် surface ကတော့ 'blade face' ဖြစ်ပြီး၊ positive pressure side ဖြစ်ပါတယ်။ propeller hub နဲ့ တွဲဆက်ထားတဲ့ blade ရဲ့ အောက်ခြေ ပိုင်းကို၊ 'blade root' လို့ခေါါပြီး၊ blade root နဲ့ hub အကြားမှ၊ transition region ကိုတော့ 'fillet' လို့ခေါါပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Euler’s degree of vortex နဲ့ Propeller Design အကြောင်းကို၊ မှတ်သားမိသလောက်၊ ဖော်ပြပါဦးမယ်။
Euler’s degree of vortex - 'Euler’s equation of motion' ဟာ fluid dynamics ဘာသာရပ်မှ၊ သဘေ်ာနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ကိုးကားရတဲ့ equation ဖြစ်ပါတယ်။ forces ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့၊ fluid flow အတွင်း၊ velocity ဆိုတဲ့အလျှင်နဲ့ acceleration ဆိုတဲ့အရှိန်တို့ဖြစ်ပေါါခြင်းမှ တဆင့်၊ လေ့လာအသုံးချခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
'နယူတန်ရဲ့ ဒုတိယနိယာမ' အရ၊ 'X' direction လို့ခေါါတဲ့ 'X" axis မှာ၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ force ဟာ၊ fluid element ရဲ့ ထုထည်၊ mass နဲ့ fluid ရဲ့ အရှိန် acceleration တို့ကိုမြှောက်ခြင်းနဲ့၊ ညီမျှပါတယ်။ fluid motion အတွင်းမှာ gravity forces, pressure force, viscous force, turbulence force နဲ့ compressibility force တို့ပါဝင်ပြီး၊ net force ဟာ၊ flow ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ forces အားလုံးရဲ့၊ ပေါင်းလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ compressibility force ကတော့၊ negligible အနေနဲ့၊ လျှစ်လျူရှုလို့ရပါတယ်။
compressibility force ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း မရှိတဲ့ပုံသေနည်းကို၊ 'Reynolds’s Equation of Motion' လို့ခေါါပါတယ်။ အလားတူ turbulence force ကိုပါထပ်မံ၊ လျစ်လျူရှုနိုင်ပြီး၊ 'Navier- Strokes Equation' လို့ခေါါပါတယ်။ 'Navier- Strokes Equation' မှ viscous force ကို၊ (0) အနေနဲ့ယူဆတဲ့ ပုံသေနည်းကတော့ 'Euler’s equation of Motion' ဖြစ်ပါတယ်။
'Euler’s equation of Motion' မှာ၊ gravity နဲ့ pressure force တို့ကိုသာ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ stream line flow အတွင်းမှ fluid element ရဲ့ motion ကိုသာ တွက်ချက်ခြင်းလို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ flow direction 's' မှ fluid element ရဲ့ 'resultant flow' ဟာ၊ flow direction 's' မှ fluid ရဲ့ mass နဲ့ acceleration တို့မြှောက်ခြင်းနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ရေဟာ non-viscous fluid ဖြစ်ပါတယ်။ non-viscous fluid ဟာ 'velocity' တန်ဖိုးအနေနဲ့ (0) သာရှိပြီး၊ 'stagnation points' အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အဆုံးမဲ့ပြီး ကြီးမားတဲ့ infinitely long circular cylinder အတွင်းမှ non-viscous fluid ရဲ့ 'resultant force' တန်ဘိုးကိုလည်း (0) အဖြစ်သာရရှိလာပါတယ်။
Fig. Aerofoil flow pattern
propeller blade ရဲ့ external boundary ကို၊ geometry အသုံးအနှုံးအနေနဲ့၊ 'shape' လို့၊ ခေါါပြီး၊ hydro-dynamics အသုံးအနှုံးအနေနဲ့၊ 'aerofoil' လို့ခေါါပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် 'aerofoil' ဟာ propeller blade ရဲ့ external boundary ဖြစ်ပါတယ်။ aerofoil တဝိုက်မှာ flow ဟာ၊ stream အဖြစ် direction တခုနဲ့သာ စီးဆင်းတဲ့အခါ၊ non-viscous fluid ရဲ့ flow ဖြစ်သလို၊ circulation အနေနဲ့ စီးဆင်းမှု မရှိတဲ့အတွက်၊ velocity ဟာ stagnation point အဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။ 'aerofoil' မှာ ဖြစ်ပေါါလာမယ့် 'resultant force' တန်ဘိုးကိုလည်း (0) အဖြစ်သာရရှိပါတယ်။
Fig. Forces in 'aerofoil'
အကယ်၍ aerofoil တဝိုက်မှာ flow ဟာ၊ circulation အဖြစ်၊ စီးဆင်းတဲ့အခါ vortex superimposition pattern ပေါါပေါက်လာပါတယ်။ 'vortex' ဟာ aerofoil ရဲ့ အလယ်ဗဟို center မှာဖြစ်ပေါါပါတယ်။ flow circulation ရဲ့ strength ဟာ၊ propeller blade မှ trailing edge ဆိုတဲ့ aerofoil ရဲ့ 'section shape' တွေနဲ့ 'incidence angle' တို့အပေါါ မူတည်ပါတယ်။ flow circulation ရဲ့ strength ကို 'lift' လို့ခေါါပြီး၊ lift force ဟာ aerofoil ရဲ့ face နဲ့ back တနည်းအားဖြင့် blade face နဲ့ blade back တို့ရဲ့ pressure difference မှတဆင့်၊ ဖြစ်ပေါါလာသလို၊ fluid viscosity ကြောင့်လည်း ပမာဏသေးငယ်တဲ့ drag force ဖြစ်ပေါါပါတယ်။
Fig. Longer path or Equal transit theory
aerofoil ပေါါမှ flow past နဲ့ circulation flow တို့ဟာ၊ back မှ velocity ကိုတိုးစေပြီး၊ face မှ velocity ကိုလျှော့ကျစေပါတယ်။ "Bernoulli’s principle" အရ aerofoil ပေါါမှ flow past နဲ့ circulation flow effect တို့ကြောင့် blade back မှာ pressure pressure လျှော့ကျသွားပြီး၊ blade face မှာတော့ pressure တိုးလာပါတယ်။ pressure distributions တွေဟာ၊ total lift ကိုတိုးစေပါတယ်။ blade back မှ pressure ကို increase အနေနဲ့ မြှင့်တင်မှသာ၊ lift force ကို တိုးနိုင်မှာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ၊ aerofoil ရဲ့ span ကို tips အတွင်းတိကျတဲ့ finite area တန်ဘိုးတခုအနေနဲ့၊ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ tips မှာ tendency သို့မဟုတ် prevailing movement အနေနဲ့ face နဲ့ back မှာဖြစ်ပေါါတဲ့ pressure ထက်ပိုပြီး၊ ဆန့်ကျင်ဖက် pressure ဖြင့် flow past ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ span area ရဲ့ အဆုံးမှ flow ရဲ့ lift ကိုတိုးစေကာ၊ pressure ကို equalize အနေနဲ့ ညီမျှစေပါတယ်။
Propeller Design - blades တွေတခုနဲ့တခုအကြားမှာ 'interference effect' ရှိနေပြီး၊ blade ရဲ့ face နဲ့ back မှ၊ blade tip မှာ ရှိနေမယ့် flow ကြောင့်၊ lift force နဲ့ drag force တွေဟာ၊ blade region မှာဖြစ်ပေါါနေသလို၊ tip vortex ကို modify လုပ်ကာ၊ တိုးယူနိုင်ပါတယ်။ axial နဲ့ rotational in flow factors တွေဟာလည်း၊ blades တွေရဲ့ span ကို tips အတွင်းတိကျတဲ့ finite area တန်ဘိုးတခုအနေနဲ့  ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ lift force ကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ propeller blades တွေကို aerofoil ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ပေါါ မူတည်ပြီး၊ lifting line model, lifting surface model, surface vorticity model နဲ့ vortex lattice model ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Lifting line model propeller blade
single bound vortex အနေနဲ့ radial circulation ဖြစ်ပေါါပြီး vortices strength ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့၊ aerofoil ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို၊ 'lifting line model' လို့ခေါါပြီး၊ (၁၉၅၂) နှစ်ခန့်မှစပြီး၊ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အထက်မှာ radial circulation ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာမယ့် vortices strength တွေကို၊ propeller ရဲ့ trilling edges တွေမှာ trilling vortex တွေအဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ propeller blade ပေါါမှ radial line ဟာ 'lifting line' ဖြစ်ပါတယ်။ propeller ရဲ့ blade surface မျက်နှာပြင်ကို၊ leading edge ဖက်မှ လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ကာ၊ စမ်းကြည့်လျှင် ရုတ်တရက် မောက်သွားပြီး၊၊ 'lifting line' ကိုသိသိသာသာ ထိတွေ့မိမှာဖြစ်သလို၊ trilling edge ဖက်မှာတော့ ပြေလျှော့ကာ ဆင်းသွားတာကို၊ စမ်းသတ်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Lifting surface model
infinitely thin bound vortex sheet အနေနဲ့၊ တခုနဲ့တခု အလိုက်သင့်ဆက်စပ်ကာ၊ ထပ်ထားပြီး၊ lifting characteristic ကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့၊ aerofoil ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန် ကိုတော့ 'lifting surface model' လို့ခေါါပြီး၊ (၁၉၈၀) ခုနှစ်ခန့်မှစပြီး၊ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အထက်မှာ thin bound vortex sheet တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါါလာမယ့် vortices strength တွေကို၊ propeller ရဲ့ trilling edges တွေမှာ trilling vortex တွေ အဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ propeller ရဲ့ blade surface မျက်နှာပြင်ကို၊ leading edge ဖက်မှ လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ကာ၊ စမ်းကြည့်လျှင် trilling edge ဖက်သို့၊ အထပ်အထပ်တွေနဲ့၊ နိမ့်လျှောကာ ဆင်းသွားတာကို၊ သိသိသာသာထိတွေ့မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Surface vorticity model propeller blade
vortex sheet အနေနဲ့၊ တခုနဲ့တခုအလိုက်သင့်ဆက်စပ်ကာ၊ ထပ်မထားပဲ၊ vortices တွေကို၊ section အလိုက်အကွက်ဖော်ထားတဲ့ aerofoil ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကိုတော့ 'surface vorticity model' လို့ခေါါပါတယ်။ အကွက်လိုက်ရှိနေတဲ့ vortices ဆိုတဲ့၊ vortex sheet တွေမှတဆင့်၊ vortices strength ကို၊ propeller ရဲ့ trilling edges တွေမှာ trilling vortex တွေအဖြစ်ရရှိပါတယ်။ polished အနေနဲ့ 'သ' ထားတဲ့ propeller ရဲ့ blade surface မျက်နှာပြင်ကို၊ ငါးအကြေးခွံအကွက်ပုံသဏ္ဍန်၊ မျက်နှာပြင်အဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
propeller blade ပေါါမှာ radial line ဆိုတဲ့ lifting lines တွေထည့်သွင်းထားပြီး၊ radial line တွေ အတွင်းမှာ vortices တွေကို၊ section အလိုက်အကွက်ဖော်ထားတဲ့ aerofoil ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန် ကိုတော့ 'vortex lattice model' လို့ခေါါပါတယ်။ radial line တွေအတွင်းမှ အကွက်လိုက်ရှိနေတဲ့ vortices တွေမှ တဆင့်၊ propeller ရဲ့ trilling edges တွေမှာ trilling vortex တွေကို ရရှိပါတယ်။ propeller ရဲ့ blade surface မျက်နှာပြင်ကို၊ leading edge ဖက်မှလက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ကာ၊ စမ်းကြည့်လျှင်၊ trilling edge ဖက်သို့၊ lifting lines တွေနိမ့်လျှောကာဆင်းသွားတာကို၊ သိသိသာသာထိတွေ့မိမှာဖြစ်သလို၊ ငါးအကြေးခွံအကွက်တွေလို၊ vortices တွေကိုလည်း၊ သိသိသာသာထိတွေ့မိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reference : Euler's Degrees of Vortex
Image credit to : http://www.ittcwiki.org/, http://www.industrialshapeandform.com/, http://en.wikipedia.org/, http://dc106.4shared.com/
Posted by ကိုထွန်း at 21:54 No comments:
Fixed pitch propeller, Controllable pitch propellers, Azimuth propellers, Vertical axis propellers, Paddle wheels နဲ့ Shrouded propellers တွေရယ်လို့ အမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားပေမယ့်၊ ‘Mathematical Analysis’ မှာတော့ အားလုံးဟာအတူတူပဲရယ်လို့၊ သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရသလို၊ propellers တွေရဲ့ efficiency နဲ့ပက်သက်သမျှ မှတ်သားမိသလောက်ကိုဖော်ပြပါဦးမယ်။ propeller ကို actuator disc တစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားပြီး၊ disc လည်ပတ်မှုကြောင့်၊ ရေမှာ axial acceleration ဖြစ်ပေါါစေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
Fig. Diameter of the propeller disk
disc နဲ့ ယက်ထုတ်လိုက်တဲ့၊ ရေ ရဲ့ အလျှင် velocity of water ဆက်သွယ်ချက်ကို၊ အပေါါမှာဖော်ပြ ထားပါတယ်။ "ɑ" ကို axial inflow factor အဖြစ်ယူဆပြီး၊ propeller တပါတ်၊ တနည်းအားဖြင့် disc တပါတ်လည်တိုင်း သက်ရောက်မှုကြောင့်၊ ပေါါပေါက်လာမယ့်၊ ရေထုထည်ပမာဏ mass of water ကို “M“ လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
mass of water "M" ကို၊ အထက်မှာဖော်ပြထားသလို၊ ယူဆပါတယ်။ 'နယူတန်ရဲ့ တတိယနိယာမ' အရ၊ propeller မှ၊ ရေကို ယက်ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်၊ thrust force acting ဖြစ်ပေါါလာကာ သဘေ်ာရွှေ့လျားပါတယ်။
အဲဒီအခါ၊ 'အဟုန်' ဆိုတဲ့ momentum ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ " Momentum = Mass X Velocity" ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ thrust အဖြစ်၊ အထက်မှာဖော်ပြထားသလို၊ ပြောင်းလဲရယူနိုင်ပါတယ်။
water column မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့် 'kinetic energy' ကို၊ တွက်ချက်ရယူရနိုင်ပါတယ်။ Work Done = Kinetic Energy ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ɑ = b/ 2’ လို့သတ်မှတ်ကာ၊ disc ရဲ့ ဧရိယာတဝက်ကိုသာ ရေဟာ ထိတွေ့ပြီး၊ အလျှင်ကိုဖြစ်ပေါါစေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အထက်မှာ 'useful work done' နဲ့၊ 'total work done' တို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ thrust ကြောင့် သဘေ်ာရွေ့လျားခဲ့ရပြီး၊ သဘေ်ာကို အလျှင်နဲရွေ့လျားစေခြင်းဟာ work done ဖြစ်ပါတယ်။ water column မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့် 'kinetic energy' ကိုလည်း၊ အထက်မှာဖော်ပြထားသလို တွက်ယူနိုင်ပါတယ်။
"useful work done" ဟာ input ဖြစ်ပြီး၊ "total work done" ကတော့ output ဖြစ်ပါတယ်။ efficiency ဟာ input နဲ့ output တို့ရဲ့ အချိုးဖြစ်တဲ့အတွက်၊ efficiency ( η ) ကို အထက်မှာဖော်ပြထား သလို၊ ပြောင်းလဲရယူနိုင်ပါတယ်။ efficiency ( η ) ဟာ၊ ideal efficiency ဖြစ်ပြီး၊ ‘ɑ’ ဆိုတဲ့၊ axial inflow factor သေးငယ်လေ၊ efficiency ကြီးမားလေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ speed နဲ့ thrust ပမာဏများများရစေဖို့ disc သို့မဟုတ် propeller မှယက်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရေရဲ့အလျှင် velocity ပမာဏ များဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ axial velocity အနေနဲ့သာ၊ အခြေခံစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ propeller ဟာလည်ပတ်ရင်းရွေ့လျားတဲ့အတွက်၊ ( ἀ ) ဆိုတဲ့ 'rotational inflow factor' ကိုပါထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့လိုလာပါတယ်။ အဲဒီအခါ လည်ပတ်မှုကြောင့် ပေါါပေါက်လာမယ့် rotational velocity အဖြစ် စဉ်းစားကြည့်ခြင်းမှ 'overall efficiency ( η )' ကိုရရှိလာပါတယ်။
'Mathematical Analysis' မှာ၊ propeller ကို actuator disc တခုအဖြစ်သာ စဉ်းစားပြီး၊ လည်ပတ်ကာ ယက်ထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် propeller blades တွေအကြားမှာ ဖြစ်ပေါါလာမယ့် hydro-dynamics losses တွေကို လစ်လျူရှုထားပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ propeller လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ blades တိုင်းဟာ thrust ကိုဖြစ်ပေါါစေသလို၊ angular acceleration နဲ့ perpendicular distance တွေကြောင့် torque ကိုလည်းဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ Propeller's Designs တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါ၊ Hydro-dynamics သို့မဟုတ် Fluids Mechanics ဘာသာရပ်မှ၊ Reynolds’s Equation of Motion, Navier- Strokes Equation, Euler Equation of Motion နဲ့ Eulers Degrees of Vortex အစရှိတဲ့ theory တွေကို ကျယ်ပြန့်စွာကိုးကားရ ပါတယ်။
cavitation နဲ့ wake ကဲ့သို့၊ hydro-dynamics ဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေဟာ၊ boss diameter ratio ကြီးတဲ့ screw propeller တွေရဲ့၊ efficiency ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ CPP ဆိုတဲ့ controllable pitch propeller ဟာ၊ boss diameter ratio (Db/ D) ကြီးတဲ့အတွက်၊ သဘေ်ာရဲ့ maneuverability ကို ပိုကောင်းမွန်စေပေမယ့်၊ overall Efficiency ( η) ကတော့၊ FPP ဆိုတဲ့ fixed pitch propeller နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊၊ ပိုနည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ CPP ရဲ့ boss diameter ratio (DB/ D) ဟာ၊ 0.24 ~ 0.32D ခန့်ရှိပြီး၊ FPP ရဲ့ boss diameter ratio (DB/D) ကတော့၊ 0.16 ~ 0.25 ခန့် ရှိပါတယ်။
propeller speed ကို၊ အထက်မှာဖော်ပြထားသလို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ pitch ဆိုတာကတော့၊ X - axis ဝင်ရိုးပေါါမှာ propeller တပါတ်လည်တိုင်းရောက်ရှိမယ့် distance အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာ propeller ဟာ၊ ရေထဲမှာလည်ပတ်ရတဲ့အတွက်၊ ရေရဲ့ တွန်းအားကြောင့် slip ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ propeller ရဲ့ speed ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။
propeller pitch-diameter ratio (P/D) ကို Bp - δ diagram မှရယူနိုင်ပါတယ်။ Bp နဲ့ δ ကို တွက်ထုတ် ယူတဲ့အခါ၊ N = the revolution of the engine at an optimum condition favorable for the propeller operation, PD = the engine delivered horse power, VA = speed of advance, D = diameter of the propeller စတဲ့၊ prime mover မှ အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ Bp နဲ့ δ ကိုတွက်ယူပြီးတဲ့အခါ၊ 'Bp - δ' diagram မှ open water efficiency တန်ဘိုးနဲ့၊ pitch diameter ratio (P/ D) တန်ဘိုးတို့ကိုရွေးချယ် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Fig. Bp - δ diagram
pitch diameter ratio P/ D တန်ဘိုးကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ မှားယွင်းရွေးချယ်မိလျှင်၊ engine ရဲ့ output power နဲ့ speed တန်ဘိုးခြင်းတူပေမယ့်၊ propeller diameter နဲ့ pitch တန်ဘိုးပိုကြီးတဲ့ သဘေ်ာမှာ၊ engine over load ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
Fig. Propeller radius
propeller blade အဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့၊ material အမျိုးအစားတွေကတော့၊ Cast steel, Special propeller bronze, Ni - Al - bronze, Nodular cast iron, Special cast iron, Ordinary cast iron နဲ့ Gun metal တို့ဖြစ်ပါတယ်။ propeller blade ရဲ့ thickness ကိုတွက်ယူတဲ့အခါ၊ Taylor's method ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အထက်မှာ propeller blade ရဲ့ thickness ကိုတွက်ယူတဲ့ ပုံသေနည်းကို၊ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ Taylor's method အရ၊ propeller strength calculation ကိုလည်းတွက်ချက်နိုင်သလို၊ 'Classification Societies' တွေကလည်း၊ propeller အတွက် အသုံးပြုမယ့် material properties တွေနဲ့၊ ပက်သက်ပြီး၊ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
Classification Society တခုဖြစ်တဲ့၊ DNV (Det Norske Veritas) မှ၊ သတ်မှတ်ထားတာကတော့
- Propeller Material (Cast steel) = Minimum ultimate tensile stress 41 kg/mm2 = Minimum Elongation 20 %
- Propeller Material (Special propeller bronze) = Minimum ultimate tensile stress 45 kg/mm2 = Minimum Elongation 20 %
- Propeller Material (Ni - Al - bronze) = Minimum ultimate tensile stress 60 kg/mm2 = Minimum Elongation 16 %
- Propeller Material (Nodular cast iron, heat treated) = Minimum ultimate tensile stress 40 kg/mm2 = Minimum Elongation 15 %
- Propeller Material (Nodular cast iron, not heat treated) = Minimum ultimate tensile stress 40 kg/mm2 = Minimum Elongation3%
- Propeller Material (Special cast iron) = Minimum ultimate tensile stress 55 kg/mm2 = Minimum Elongation 8 %
- Propeller Material (Ordinary cast iron) = Minimum ultimate tensile stress 24 kg/mm2 = Minimum Elongation0%
- Propeller Material (Gun metal) = Minimum ultimate tensile stress 14 kg/mm2 = Minimum Elongation 8 % တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် reciprocating engine, turbine နဲ့ diesel electric အမျိုးအစား အစရှိတဲ့ တွဲဖက် အသုံးမယ့်၊ prime mover ရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့၊ တတ်ဆင်မယ့် propeller ဟာ single screw သို့မဟုတ် twin screw အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေပေါါ၊ မူတည်ပြီး၊ propeller blade material ရဲ့ density နဲ့ design stress တို့မှာ၊ ကွာခြားမှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Reference : Marine Propellers and Propulsion, John Charlton, 2nd ed. (2006), Introduction to Naval Architecture, Tupper, E.C, 4th ed. (2004),
Image credit to : http://www.ittcwiki.org/
Posted by ကိုထွန်း at 08:05 No comments:
propellers တွေကို anti-corrosive metal alloy တွေဖြစ်တဲ့ aluminum alloy, stainless steel alloy နဲ့ NAB လို့ခေါါတဲ့ nickle-aluminum-bronze alloy တို့ကိုအသုံးပြုကာ၊ ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ NAB ဟာ aluminum နဲ့ stainless steel alloy တို့ထက်၊ (၁၀) % မှ (၁၅) % ခန့် ပိုမိုပေါ့ပါးသလို၊ မြင့်မားတဲ့ မာကျောမှု higher strength လည်းရှိပါတယ်။ propellers တွေကို၊ type အနေနဲ့ တခုနဲ့တခု ခွဲခြားတဲ့အခါ၊ number of blades attached ဆိုတဲ့၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ blade အရည်အတွက်ပေါါမူတည်ပြီး၊ ခွဲခြားသလို၊ blade ရဲ့ pitch angle ပေါါမူတည်ပြီးတော့လည်း၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ blade အရည်အတွက်ပေါါမူတည်ပြီး၊ ခွဲခြားတဲ့အခါ3blade propeller,4blade propeller နဲ့5blade propeller ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။
3 blade propellers တွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစားရိတ် manufacturing cost ဟာ၊4blade နဲ့5blade propellers တွေထက်စာလျှင်၊ လျှော့နည်းသက်သာပါတယ်။3blade propellers တွေကိုထုတ်လုပ်ရာမှာ၊ aluminum alloy ကိုအသုံးပြုသလို၊ NAB alloy ကိုလည်း၊ အသုံးပြုပါတယ်။ aluminum alloy ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ မြင့်မားတဲ့ high speed performance နဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ acceleration တို့ကို ရရှိပေမယ့်၊ low speed handling မှာတော့ efficiency အပြည့်မရနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
4 blade propellers တွေကတော့ stainless steel alloy နဲ့ NAB alloy တို့ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်၊ strength and durability ဆိုတဲ့ မာကျောအကြမ်းခံခြင်း၊ low speed performance သာလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ အပြင်၊ လှိုင်းကြမ်းလေကြမ်း rough sea မှာ၊ သဘေ်ာသွားလာမောင်းနှင်တဲ့ အခါ၊ handling power လည်းကောင်းမွန်သလို၊ fuel economy ဆိုတဲ့ လောင်စာသုံးစွဲမှု ကုန်ကျစားရိတ် သက်သာတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။5blade propellers တွေဟာ၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစားရိတ် မြင့်မားပေမယ့် vibration ဖြစ်ပေါါမှုအနည်းဆုံးနဲ့ handling power အကောင်းဆုံး၊ propeller တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ blade ရဲ့ pitch အပေါါမူတည်ပြီး၊ ခွဲခြားတဲ့အခါ FPP ဆိုတဲ့ fixed pitch propeller နဲ့ CPP ဆိုတဲ့ controllable pitch propeller ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။
propellers တွေမှာ အဓိကအစိတ်အပိုင်း major component အဖြစ် propeller cap, cover plate နဲ့ rope guard တို့ပါဝင်ပါတယ်။ propeller cap ကို fair water cap လို့ခေါါသလို၊ dunce cap လို့လည်းခေါါပါတယ်။ propeller cap ဟာ၊ boss nut လို့ခေါါတဲ့ propeller shaft အဆုံးမှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ nut ရဲ့ အပေါါမှ၊ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အဖုံး ဖြစ်ပါတယ်။ cap ရဲ့ အတွင်းမှာ female threads တွေပါဝင်ပြီး၊ propeller shaft အဆုံးမှ male threads တွေနဲ့ ရစ်ကာ၊ ဖမ်းထားပါတယ်။ cap အတွင်း liquid preservative လို့ခေါါတဲ့၊ corrosion ဖြစ်ပေါါမှုကိုတားဆီးမယ့် အရည်တမျိုးကိုထည့်ပြီးမှ၊ တတ်ဆင်တဲ့အတွက် ferrous shaft နဲ့ propeller nut တို့ကို၊ ပင်လယ်ရေ sea water နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းမှ၊ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
cap ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ဟာ conical shape ဆိုတဲ့ အခုံးပုံသဏ္ဍန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်၊ hub မှတဆင့် သက်ရောက်လာမယ့် hydro-dynamics သက်ရောက်မှုတွေကို၊ contour အနေနဲ့ အလိုက်သင့်လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ propeller ရဲ့ design အရ၊ cap (၁) ခု သို့မဟုတ် (၂) ခု တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ propeller မှာ 'prairie air system' ကို တတ်ဆင် အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ air system component house ရဲ့ အရှေ့ဖက်၊ forward section မှာ cap (၂) ခုကို၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Prairie air system
'Prairie air system' ဟာ သဘေ်ာမောင်းနှင်ခုတ်မောင်းရာမှ၊ ပေါါထွက်လာမယ့် ဆူညံသံ noise တွေကို၊ လျှော့ချပေးတဲ့ 'radiated noise reduction system' ဖြစ်ပါတယ်။ propeller blades တွေရဲ့ leading edges တွေမှ၊ compressed air ကိုထုတ်ပေးပြီး၊ propeller လည်ပတ်ရာမှ ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ hydro-dynamics noise တွေကို၊ လျှော့ချပေးခြင်း လည်းဖြစ်ပါတယ်။ propeller လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ blades တွေရဲ့ နောက်ဖက်မှာ၊ ဖိအားနိမ့် low pressure area ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ ရေအောက်မှ low pressure area မှ pressure ဟာ၊ vapor pressure ထက် နိမ့်တဲ့အတွက်၊ vapor bubbles တွေဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ bubbles တွေဟာ low pressure area မှကျော်လွန်သွားတာနဲ့ ပေါက်ကွဲထွက်ကာ၊ 'cavitation' ကိုဖြစ်ပေါါစေသလို၊ noise ကိုလည်း ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
prairie air system ကိုအရပ်ဖက်သုံး commercial ships တွေမှာထက် စစ်ဖက်သုံး warships တွေမှာသာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ hydro-dynamics noise တွေကို၊ လျှော့ချတဲ့ prairie air system ဟာ၊ anti-submarine warfare solution လို့ခေါါတဲ့၊ passive sonar system တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ passive sonar system ဖြစ်ပေမယ့် cavitation ကိုပါ၊ လျှော့ချနိုင်တဲ့အတွက် အရပ်ဖက်သုံး commercial ships တွေမှာလည်း၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ blades တွေရဲ့ trailing edges တွေမှတဆင့်၊ compressed air ကိုမှုတ်ထုတ်တဲ့အခါ၊ propeller လည်ပတ်မှုကြောင့်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ low pressure area မှာ၊ ဖိအား pressure တက်လာသလို၊ bubbles တွေအတွင်းမှာလည်း၊ compressed air ရောပါဝင် သွားတဲ့အတွက်၊ bubbles တွေရဲ့ပေါက်ကွဲမှုအရှိန်လည်း၊ လျှော့ကျသွားပါတယ်။
prairie air ကို၊ bleed air header tank မှရယူပါတယ်။ sea water ကို အသုံးပြုတဲ့ cooler မှာ ဖြတ်သန်းစေပြီး၊ propeller shaft အတွင်းမှတဆင့် propeller hub သို့ပေးပို့ပါတယ်။ cooler အထွက်မှာ compressed air ဟာ၊ flow meter နဲ့ oil distribution box တို့ကိုဖြတ်သန်းပြီးမှ၊ rotor seal မှတဆင့် shaft အတွင်းသို့၊ ရောက်ရှိပါတယ်။ hub မှ blade အတွင်းသို့ပေးပို့ရာမှာ၊ hub body နဲ့ blade base ကြားမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ bushing connection တွေမှတဆင့်၊ ပေးပို့ပါတယ်။
Fig. Prairie air system testing
blade ရဲ့ leading edges လို့ခေါါတဲ့ trailing edges တွေမှာ၊ orifices တွေကို တတ်ဆင်ထားပြီး၊ ပြင်ပမှ sea water တွေ back flow အနေနဲ့ စီးဝင်မလာစေဖို့၊ compressed air ဖြတ်သန်းသွားမယ့် propeller shaft အတွင်းမှာတော့ check valves တွေကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ prairie air system ကို၊ သဘေ်ာကျင်းမှာ 'လွန်း' တင်တဲ့အခါ၊ compressed air အစား၊ rotor seal မှတဆင့် fresh water ပေးသွင်းကာ၊ စမ်းသတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Masker system
anti-submarine warfare solution လို့ခေါါတဲ့၊ passive sonar system နောက်တမျိုးကတော့၊ 'Masker System' ဖြစ်ပါတယ်။ acoustic impedance အနေနဲ့ ခြေဖျက်အသံလှိုင်း တခုကို၊ passive sonar system အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ 'ဧရာ' လို့ခေါါတဲ့ hull မှာ compressed air ထုတ်ပေးမယ့်၊ emitter belts တွေတတ်ဆင်ထားပြီး၊ သဘော်မောင်းနှင် ခုတ်မောင်းရာမှ၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် machinery noise တွေကို၊ bubble blank အလွှာတခုအဖြစ်၊ ဖုံးအုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ပေးတဲ့ compressed air ရဲ့ pressure ပမာဏဟာ၊ 1.8 bar ခန့်နဲ့ flow rate ပမာဏကတော့ 12 Cu. meter/ minutes ခန့်ရှိပါတယ်။
Reference : Lamb's questions and answers on the Marine Diesel Engine, Stanley G. Christensen, John Lamb, 1990., Reed's Naval Architecture Volume IV for marine Engineers Class 1 and Class 2, E.A. Stokoe, 2010 Edition.
Image credit to : http://www.shipsol.com/, http://www.fas.org/ United State Navy Official Website
Posted by ကိုထွန်း at 05:55 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 01:50 No comments:
"Guidelines for Oil Terminal Operators on The IMO ISPS Code"
"Guidelines for Oil Terminal Operators on The IMO ISPS Code" ကို၊ ဒီနေရာ မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 05:03 No comments:
"ရေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ စာအုပ်စာတမ်းများ"
ရေကြောင်းဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းတွေကို၊ "စာအုပ်စာတမ်းများ" ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ စာအုပ်တွေရဲ့ Link ကိုပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ စာအုပ်တချို့ရဲ့ Link တွေ၊ အလုပ် မလုပ်တော့တာကို၊ တွေ့ရ ပါတယ်။"စာအုပ်စာတမ်းများ" ခေါင်းစဉ်အောက် မှ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်းတွေကို၊ "ရေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာစာအုပ်စာတမ်းများ" ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ၊ ပြောင်းလဲတင်ပေးဖို့၊ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာစာမေးပွဲတွေအတွက်၊ GEK လို့ခေါါတဲ့ General Engineering Knowledge, MEK လို့ခေါါတဲ့ Motor Engineering Knowledge, Naval Architecture နဲ့ Electro-Technology ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ၊ မှတ်စုတွေနဲ့ လူတွေ့နှုတ်ဖြေ Orals မှတ်စုတွေကို၊ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
"Marine Diesel Engines and Gas Turbines" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို၊ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 9th Edition ဖြစ်ပြီး၊ (၂၀၀၉) ခုနှစ်ကထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ MAN B & W, Mitsubishi, Wartsila, Sulzer, Burmeister & Wain ဆိုတဲ့ B & W, Doxford နဲ့ MAN အစရှိတဲ့၊ low speed engines တွေ၊ Rolls-Royce, Caterpillar, Pielstick, Deutz, MaK နဲ့ Ruston အစရှိတဲ့၊ medium speed engine တွေနဲ့ High speed engine တွေအပြင်၊ Gas Turbines တွေအကြောင်းပါ၊ ပါဝင်ပါတယ်။ စာအုပ်ကို ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
"GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES" ဆိုတဲ့၊ စာအုပ်ကို၊ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Don Butler ရေးသားပြီး၊ Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford မှ၊ ထုတ်ဝေ ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေကို သဘေ်ာကျင်းမှာလွန်းတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါ၊ ပြုလုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက်၊ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းကို၊ တာဝန်ယူရတဲ့ "Technical Superintendents" တွေရဲ့၊ ကိုးကားစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကလေး ကတော့ Workplace Safety & Health (WSH) Manual for the Marine Industries ဆိုတဲ့၊ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ာပူက သဘေ်ာကျင်းတွေမှာ၊ လိုက်နာဖို့ The Association of Singapore Marine Industries (ASMI) နဲ့ Workplace Safety and Health (WSH) Council တို့မှ၊ ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 21:29 No comments: